काठमाडौमा रातको पचास हजार लिन्छन कलेजमा पढ्ने यौ*नक*र्मी युवतीहरु – ramechhapkhabar.com
काठमाडौमा रातको पचास हजार लिन्छन कलेजमा पढ्ने यौ*नक*र्मी युवतीहरु
खान लाउन नै नपुगेपछि काम कुनै नपाउदा मानिसहरु समाजमा तल्लो स्तरमा गनिएका कामहरु गर्न पुग्छन । नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको एक कार्यक्रम संघर्षमा केहि वर्ष अघि ठमेल र वरपर बस्ने केहि यौ*नक*र्मीको अन्तरबार्ता लिइएको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा राति ठमेल, रत्नपार्क र त्यहाँ वरपर कसरि मानिसको एक रातको लागि किनबेच हुन्छ भन्ने कुरा सबै देखाइएको थियो । उक्त कार्यक्रममा प्रायले काठमाडौँ आएर केहि काम नपाएकोले बाध्य भएर यो काम गर्नु परेको बताएका थिए ।
हो नपढेका, गाउँबाट भर्खर आएकाहरुको लागि काठमाडौँमा बस्न गाह्रो छ ।पढ्दै गरेका, जाने बुझेका मानिस हरुले पनि काठमाडौँमा काम नपाउदा कति बाध्य भएर आफ्नो हाता मुख जोर्नको लागि भए पनि यौ*नक*र्मी बनेका छन् ।काठमाडौँको विभिन्न कलेजमा पढ्ने युबतीहरु पनि आर्थिक अभाबले गर्दा यौ*नक*र्मी बन्ने गरेको उदाहरण भेटिन्छ ।
पति विदेशिनेको पिडा : कुइनोको धक्काले असिना पसिना भएँ ,त्यसपछि
अहिले उनि ३५ नाघेर पनि अहिले विस-वाईसे तरु*नी झैं मस्त जवान छिन् । उनि १७ वर्षकी छँदा विवाह भएको र आफैले वैवाहिक सम्वन्ध धिक्कारेर छाडेको बताउँछिन् ।रगत वग्ला जस्तो लाली चढेको चेहरामा रहेकी उनलाई नपछ्याउने कुनै पुरुष छैन् । त्यस्तो कलकलाउँदो उमेरमा विवाह गरेको श्रीमान ६ दिनसम्म सगै बसेर विदेश गएको सात वर्षसम्म घर नआएपछि आफुले सत्धर्मको क्रम भंग गरेको खुलेरै बताउँछिन् ।
उनले नाम नवताउने सर्तमा प्रदेशी श्रीमान र घरदेशी श्रीमतिको प्रतिनिधी मुलक पिडा व्यक्त गर्ने उद्देश्यका साथ आफ्ना सवै कुराहरु यसरी खोलिन –‘ विवाह गरेका श्रीमान एक हप्ता जति बसेर हिडेका हुन विदेश , त्यस पछि फर्केर आएनन् ।’अहिले त उनि घर आएकी उतै छन त्यसको वास्ता समेत मलाई छैन् । अहिले म स्वतन्त्र चरी हुँ, मै हुँ भन्नेहरुको समेत हट्केक मोरी हुँ । त्यस्तो अवस्थामा विवाह भएको मेरो उसैले चढाएको मात शान्त हुन कसरी सक्थ्यो र ? के मेरा चाहनाहरु कतिञ्जेल सत्धर्मका नाममा वञ्चित भई रहन सक्थे र ? ’
हुन पनि उच्च शिक्षा हासिल गरेकी उनलाई नपछ्याउने सानो तिनो मात्र होईन ठुला बडाहरु नै मरिहत्य गर्छन् । उनले भनिन्–‘ म कसम खाएर भन्छु मेरो फक्रेको बैंस मैले विवाह पश्चात उनैलाई पहिलो पटक सुम्पेकी हुँ । ’एक हप्ताको दौरानमा उनैले मलाई पागल बनाए । स्कुले जिवनमा मा*तेका केटाहरुले कता-कता चलाएर जिज्ञाषु बनाउन मरेका थिए । हर कोशिस गर्दा पनि मैले मेरो अस्मीता डग्मगाउन दिएकी थिईन् ।
उनि विदेश हिडेको तिन वर्षसम्म पनि मैले उनको सत् डगाउन चाहिन । विवाहको तेस्रो वर्ष म सदरमुकाम जाँदै थिएँ । अगाडीको सिटमा अटिन-अटाउँन डाईभरको सिटमा थिएँ । विस्तारै विस्तारै डाईभरका कुईनोको धक्काले मेरो शरिरमा हलचल मच्चाई दियो ।मेरो शरिर काँप्यो , खलखली असिना पसिना भएँ । म मेरो श्रीमानपछि दोश्रो पटक पागल भएकी थिएँ । ओर्लिने वेला अघि ति ड्राईभरले मागेको फोन नम्वर मैले अस्वीकार गर्न सकिन र दिएँ ।
म ओर्लेको त्यस्तै आधा घण्टापछि तिनै डाईभरको फोन आयो । त्यस फोनमा मैले मेरो श्रीमानको चेहरा देखें । उनले दिएको लोकेशनमा पुगे । होटलको कोठा बुक गरेका रहेछन् । वियरको चुस्की पनि मेरो जिवनमा त्यो पहिलो थियो । वियरको चुस्कीसंगै बैसले सतायो, उतिखेरै मर्या कोर्याले पनि विताएरै छाड्यो । क्रमशः उसको र मेरो लामो समयसम्म सम्वन्ध टिकी नै रह्यो ।विस्तारै मन फराकीलो र दह्रो हुँदै गयो , अहिले म घर न सर वुटवल काठमाण्डौं हुँदै सिमना नजिकै भारतको एक कोठीमा राम्रै पैसा कमाउन सफल भएकी छु। घर छ ,गाडी छ, अझ भनौ मसंग ऐस-आराम सवै थोक छ ।
नाक खुम्चाउँदै उनले थपनि–‘ भाँड्मा गए फगत पति–पर्मेश्वर…, मनको ईच्चा आंकंक्षा गुमाई गुमाई वाउ आमाको ईज्जत..? उनले सुझाव दिईन वैदेशिक रोजगारको नाममा कसैले कसैको ईच्छा आंकाक्षा माथी खेलवाड नगरुन् ।विदेश जानेहरुले धेरै अवधी नलम्वाउन् । अन्यथा म जस्तै कतिपय महिलाहरु यसरी नै यौ*न व्यवसायी समेत बन्न बाध्य हुने छन् । मलाई यहाँ सम्म ल्याएको त्यही निर्दयी श्रीमान भनाउँदाको बैदेशिक रोजगार नै हो । गोपनियताको लागि माथि उल्लेखित पात्रको नाम र ठेगाना यहाँ उल्लेख गरिएको छैन ।